Wasiiro ka tirsanaa Xukuumadii Cabdi Iley oo lagu qabtay Hargeysa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiiro ka tirsanaa Xukuumadii Cabdi Iley oo lagu qabtay Hargeysa
Ardaan Yare 23 August 2018
Magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland gaar ahaan garoonka diyaaradaha Cigaal international Airpor ayaa waxaa Ciidamada amaanka Soomaaliland ay halkaasi ku qabteen Wasiiro ka tirsanaa Xukuumadii uu hogaamiyaha ka ahaa Madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Cabdi Maxamuud Cumar.
Wasiirada Garoonka diyaaradaha Hargeysa lagu qabtay ayaa kala ahaa wasiirkii caddaaladda,iyo wasiirkii waxbarashada, kuwaasi oo lagu kala magacaabo Cabdi Jamaal Axmed iyo Ibraahim Aadan Mahad oo ka tirsanaa Golihii hore ee Wasiirada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Dhinaca Wararka aan ka heleyno Magaalada Hargeysa ayaa sheegay in Wasiiradaan maanta la qabaty ay ahaayeen kuwo baxsad ah,isla markaana la sheegay in ay ku soo wajah naayeen Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka Soomaaliya.
Dad Soomaali ah oo ku dhintay isbuurasho ka dhacday Xajka Sanadkan + AKHRISO
Madaxweyne axmed madoobe oo hambalyo u diray Madaxweynaha cusub ee DDSI